Khangela ukuba zeziphi ezona shampo ziqinileyo | IBezzia
Ezona shampu ziqinileyo
Susana Garcia | 04/04/2021 20:00 | Ubuhle, Iimveliso zobuhle
La umbono weeshampu eziqinileyo zisandula ukufika, kodwa baye baba mkhuba xa kufikwa ekunyamekeleni iinwele zethu. Kungenxa yoko le nto kufuneka sibonakalise kuwe into esicinga ukuba zezona shampo ziqinileyo zentengiso, iseti yezithambiso ezifanelekileyo zokukhathalela iinwele kwizimbo zemihla ngemihla, kuba ishampu yenye yezitshixo zeenwele ezisempilweni.
Los ii-shampoo eziqinileyo ziza kwifomathi enobungakanani bendalo, kuba abaqhelekanga ukufakwa kweplastiki, kodwa kwakhona, ukuba ziqinile, zimbalwa iikhemikhali zisetyenziselwa ukudala ukuthungwa kwazo kwaye ezininzi zazo ziyi-ecological, efanelekileyo emanzini, engangcolisekanga. Ke sicinga ukuba lixesha lokuba siqhubele kwizithambiso eziqinileyo.
1 Ingelosi yeNwele nguLush
2 Ishampu eqinile yezithambiso zikaMaria
3 UGqirha Tree ishampu ezimbini kwinto enye
4 Yenza i-shampoo yeenwele ezomileyo
Ingelosi yeNwele nguLush
Le yenye yeefemu eziye zagqama kakhulu ngezithambiso eziqinileyo, kuba ayinashampoo kuphela, kodwa ikwanazo nezokupholisa, iioyile kunye nazo zonke iintlobo zezinto. I-shampoos eqinileyo kaLush yenye yezona zinto zibalaseleyo ezinokuthengwa kwiwebhusayithi yazo kwaye kukho iindidi ezininzi. I-Angel Hair shampoo yenye yezona zinto zithengiswa kakhulu, ngakumbi kuba ithambile kwaye ilungele zonke iintlobo zeenwele. Phakathi kwezinto zayo ine-Ylang ylang yokuthambisa iinwele kwaye ikhathalele. I-Aquafaba yongeza ukomelela kunye nokuqaqamba, ngelixa amanzi e-rose kunye ne-hazel yegqwirha inceda ekunyamekeleni ulusu olubuthathaka. I-Soy lecithin inceda ukufunxwa kwezinye izithako. Into elungileyo kukuba sinokubona zonke izithako kunye nokuba nganye yazo inegalelo njani kwizinwele zethu, ezisinceda sikhethe ngcono.
Ishampu eqinile yezithambiso zikaMaria
Este ishampu eqinileyo yendalo, i-vegan kunye neyenziwe ngesandla. Yinwele eyilelwe iinwele ezinamafutha, kuba ngezithako zayo izama ukusombulula ingxaki ye-sebum secretion kwindawo yentloko, eyona ngxaki iphambili yeenwele ezinamafutha. Ioyile yejojoba iqulethe ukubonelela nge-hydration ngaphandle kokuva okunamafutha. Incindi yelamuni yile inceda kumandla ayo e-astringent ukulawula imveliso yamafutha. Udongwe olumhlophe lwe-kaolin lunceda ukucoca i-scalp yobumdaka ngendlela ethambileyo, ngaphandle kokophula i-pH yayo. Ukukhupha i-Hibiscus kunye neoyile ye-rosemary kunceda ukugcina iinwele zomelele kwaye zisempilweni ukusuka ezingcanjini. Alithandabuzeki elokuba lukhetho olulungileyo lwezithako zalo kunye nokunyamekela iinwele ezinamafutha.
UGqirha Tree ishampu ezimbini kwinto enye
Ukuba awunalo ixesha elininzi lenqubo yakho yeenwele okanye uyonqena, ungathenga ishampu eqinileyo ezibini kwenye njengoGqirha Tree. bucala ngasekhohlo I-coconut fragrance shampoo ilungele ukukhathalela kunye nokondla iinwele. Ine-argan oyile, esiyaziyo ukuba yigolide engamanzi ngenxa yamandla ayo okuhambisa kunye nokondla. Ukongeza, ineevithamini A kunye no-E zokuvuselela kunye nokunyamekela ifayibha yeenwele. Ikwanaso nesiseko sebhotolo yekoko esijongana nentloko. Eyona nto intle malunga nale shampu kukuba iyakucoca kunye nokuhambisa amanzi ukuze uphephe ukusebenzisa i-conditioner.
Yenza i-shampoo yeenwele ezomileyo
Zonke ezi femu zineentlobo ezininzi zeeshampu, nangona sithetha ngayo enye kuphela. Umzekelo, le ivela eValquer yeyenwele ezomileyo, nangona zikho nezinye iintlobo zeenwele. bucala ngasekhohlo ishampu eyomileyo yeenwele ineoyile yekhokhonathi exabisekileyo ukuyicoca. Kufuneka kuthiwe ayisiyo ishampu enezinto zendalo ngokupheleleyo kodwa kulungile ukuba awuyikhangeli into vegan.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ubuhle » Ezona shampu ziqinileyo